Datenschutzerklärung (EU) | Safidy USA
Ity fanambarana momba ny fiainana manokana ity dia nohavaozina farany tamin'ny 17 Jolay 2020 ary mihatra amin'ny olom-pirenena amin'ny faritra ara-toekarena eropeana.
Amin'ity fanambarana momba ny fiainana manokana ity dia manazava izay ataontsika amin'ny angonay azontsika momba anao https://usa.option.news. Manoro hevitra izahay mba hamaky am-pitandremana ity fanambarana ity. Ao amin'ny fizarana ataontsika dia manaraka ny fepetra takian'ny lalàna momba ny tsiambaratelo isika. Midika izany, ankoatra ny zavatra hafa,:
lazainay mazava tsara ny tanjonay hamolahana ny angon-drakitra manokana. Izahay dia manao izany amin'ny alalan'io fanambarana momba ny fiainana manokana io;
kendrenay ny hametra ny angon-drakitra manokana ho an'ny angon-drakitra manokana takiana amin'ny tanjona ara-dalàna;
nangataka ny fanekena mazava nataonao aloha ianao mba hanodinana ireo angon-drakinao manokana raha sendra misy ny fanekenao;
mandray fepetra mifanaraka amin'ny fiarovana tsara izahay mba hiarovana ny angon-drakinao manokana ary koa mitaky izany amin'ireo antoko izay manangana data momba ny anay manokana;
manaja ny zonao hiditra amin'ny angon-drakinao manokana izahay na nanitsy na voafafa noho ny fangatahana nataonao.
Raha manana fanontaniana ianao, na mba hahafantaranao tsara hoe inona ny angon-drakitra hitanay na ianao, azafady mba hifandraisa aminay.
1. Tanjona, angon-drakitra ary fotoanan'ny fihazonana
1.1 Izahay dia mampiasa ny data-nao ho an'ny tanjona manaraka:
Fifandraisana - Amin'ny alàlan'ny telefaona, mailaka, mailaka ary / na tranokala web
Ho an'ity tanjona ity dia ampiasainay ireto data manaraka ireto:
Anarana, adiresy ary tanàna
Ny fototry izay ahafahantsika mizaka ireo data ireo dia:
Nahazoana ny fifanarahana
Izahay dia mihazona izany data izany mandra-pahavitan'ny serivisy.
1.2 Izahay dia mampiasa ny data-nao ho an'ny tanjona manaraka:
Solonanarana, tenimiafina ary angon-drakitra manokana momba ny kaonty
Kaonty media sosialy
1.3 Izahay dia mampiasa ny data-nao ho an'ny tanjona manaraka:
1.4 Izahay dia mampiasa ny data-nao ho an'ny tanjona manaraka:
Mba hahafahana manatanteraka ny adidy ara-dalàna
1.5 Izahay dia mampiasa ny data-nao ho an'ny tanjona manaraka:
Mamondrona sy manadihady antontan'isa momba ny fanatsarana tranonkala
2. Fizarana amin'ny fety hafa
Tsy zarainay amin'ireo antokona fahatelo ny data-nao.
Mampiasa cookies ny tranokalanay. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny mofomamy, azafady mba jerena ny momba anay Famoahana Cookie.
Namarana ny fifanarahana momba ny fanodinana data miaraka amin'i Google izahay.
Google dia tsy mety mampiasa ny data ho an'ny serivisy Google hafa.
Ny fidiran'ny adiresy IP feno dia voasakanay.
Manolo-tena amin'ny fiarovana ny angon-drakitra manokana izahay. Izahay dia mandray fepetra fiarovana tsara mba hamerana ny fanararaotana na tsy nahazoana alalana hiditra amin'ny angon-drakitra manokana. Izany dia miantoka fa ny olona ilaina ihany no miditra amin'ny angon-drakitrao, ny fidirana amin'ny angon-drakitra dia arovana, ary ny fiheverantsika ny fiarovana anay dia averina tsy tapaka.
5. tranokalan'ny antoko fahatelo
Ity fanambarana momba ny fiainana manokana ity dia tsy mihatra amin'ireo tranokalan'ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny rohy ao amin'ny tranokalanay. Tsy afaka manome toky izahay fa ireo antoko fahatelo dia mitazona ny angon-drakinao manokana amin'ny fomba azo antoka sy azo antoka. Manoro hevitra izahay hamaky ireo fanambarana momba ny tsiambaratelo na ireo tranonkala ireo alohan'ny hampiasana ireo tranonkala ireo.
6. Fanitsiana an'io fanambarana momba ny fiainana manokana io
Izahay dia manana ny zo hanao fanovana amin'ity fanambarana momba ny fiainana manokana ity. Torohevitra fa hijery matetika ity fanambarana momba ny tsiambaratelo ity ianao mba hahafantaranao ny fiovana rehetra. Ankoatr'izay, hampandre anao izahay isaky ny azo atao.
7. Fidirana sy fanovana ny data-nao
Raha manana fanontaniana ianao na te hahalala izay angon-drakitra momba anay manokana momba anao, azafady mba hifandraisa aminay. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fampiasana ny fampahalalana eto ambany. Manana ny zonao manaraka ianao:
Manan-jo hahafantatra ny antony ilana ny angon-drakinao manokana ianao, inona no hitranga aminy ary mandra-pahoviana hihazonana azy io.
Zo havanana: manan-jo hiditra ny angon-drakinao manokana izay fantatra aminay.
Zo havanana amin'ny fanitsiana: manana zo hameno, hanitsy, namafa na nanakana ny datao manokana ianao isaky ny maniry.
Raha manome anay ny fahazoan-dàlana anao amin'ny fanodinana ireo angon-drakinao ianao dia manan-jo hanafoana izany fanekena izany ianao ary hamafa ny angon-drakinao manokana.
Zo ny hampita ny angon-drakinao: manan-jo hangataka ny angon-drakinaoo manokana avy amin'ny mpandrindra ianao ary hamindra izany amin'ny alàlan'ny fanaperana hafa.
Zo manohitra: mety manohitra ny famoahana ny angon-drakinao ianao. Manaraka izany isika, raha tsy misy antony marim-pototra anaovana fanodinana.
Azafady mba ampahafantaro milaza mazava foana ianao hoe iza ianao, mba ahafahantsika mahazo antoka fa tsy manova na mamafa ny data izahay na ilay olona tsy mety.
8. Famoahana fitarainana
Raha tsy afa-po amin'ny fomba iatrehana (fitarainana momba) ny fanodinana ny angon-drakinao manokana ianao, manan-jo hametraka fitarainana amin'ny Data Protection Authority ianao.
9. Ny antsipiriany momba ny fifandraisana
Helmut Melzer, Option Media eU
Seidengasse 13 / 3, A-1070 Vienna, Aotrisy
Ity ohatra ity dia mampiseho fampahalalana fototra momba izay fampahalalana manokana ataon'ny tranombarotra anananao, fivarotana, fizarana ary iza no mety hahazo an'io fampahalalana io. Miankina amin'ny fananganana mety sy ireo plugins fanampiny ampiasaina, tsy hitovy ny fampahalalana manokana ampiasain'ny fivarotanao. Manoro hevitra ny torohevitra ara-dalàna izahay mba hanazava momba izay fampahalalana momba ny politikanao momba ny tsiambaratelo.
Manangona fampahalalana momba anao izahay mandritra ny dingana fametrahana ao amin'ny magazay.
Izay angoninay ary tehirintsika
Rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao dia mirakitra hoe:
Olana asongadina: Ireto misy vokatra vitsivitsy izay vao hitanao tato ho ato.
Toerana, adiresy IP ary karazana navigateur: Ampiasainay izany ho an'ny tanjona toy ny fanombanana ny hetra sy ny saram-pandefasana
Adiresy fandefasana: mangataka aminao izahay mba hanondro izany, ohatra, mba hamaritana ny vidin'ny fandefasana alohan'ny hametrahanao ny baiko, ary hahafahana mandefa anao ny baiko.
Mampiasa cookies ihany koa izahay hanaraha-maso ny votoatin'ny carte de chères ianao raha mitsidika ny tranokalanay.
Fanamarihana: tokony hampidirinao ny politikan'ny cookieo amin'ny antsipiriany bebe kokoa ary hampifandray amin'ity faritra ity eto.
Rehefa miantsena miaraka aminay ianao, mangataka aminao izahay hanome vaovao toy ny anaranao, ny adiresy ary ny adiresy fandefasana, ny adiresy imailaka sy ny laharana an-tariby, ny antsipirian'ny carte de crédit / ny pitsopitsony fandoavam-bola ary ny mombamomba ny kaonty safidy toy ny anarana sy ny tenimiafina. Ampiasainay amin'ireto tanjona ireto ireto fampahalalana ireto:
Fandefasana ny mombamomba ny kaontinao sy ny filaharana
Valio amin'ny fanontanianao, ao ny famerenam-bola sy fitarainana
Ny fanodinana ny fifanakalozana fandoavana ary ny fisorohana ny hosoka
Amboary ny kaontinao ho an'ny tranombarotra entinay
Ny fanarahan-dalàna amin'ny adidy ara-dalàna rehetra, toy ny fanombanana hetra
Ny fanatsarana ny tranombarotra atolotray
Mandefasa hafatra momba ny marketing raha tianao ny handray azy ireo
Rehefa mamorona kaonty aminay ianao dia hitahiry ny anaranao, ny adiresinao, ny adiresy mailaka ary ny laharan'ny findainao. Ity fampahalalana ity dia hampiasaina amin'ny baiko ho avy hamita ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola. Matetika izahay dia mitahiry vaovao momba anao raha mbola mila izany ho an'ny anton'ny fanangonam-bokatra sy fampiasana ary takiana hitehirizana izany. Ohatra, mitahiry fanazavana momba ny fisie mandritra ny roa taona isika noho ny antony hisian'ny hetra sy ny fandoavam-bola. Tafiditra ao ny anaranao, ny adiresy imailaka ary ny adiresy faktiora sy ny fandefasana anao. Izahay dia mitahiry fanehoan-kevitra na salanisa raha manapa-kevitra ny handao azy ireo ianao.
Iza avy ao amin'ny ekipanay no miditra
Ireo mpikambana ao amin'ny tarika misy anay dia afaka miditra amin'ny fampahalalana izay nomenay anay. Ohatra, ny mpitantana na ny mpitantana fivarotana dia afaka miditra:
Mandahatra ny fampahalalana toy ny vokatra novidiana, ny fotoana nividy sy ny adiresy fandefasana ary
Fampahalalana momba ny mpanjifa toy ny anaranao, adiresy imailaka ary fampahalalana momba ny fandoavam-bola sy fandefasana.
Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia afaka miditra amin'ity fampahalalana ity mba hamolavola baiko, hamerenana ary hanampy anao.
Izay ifampizarantsika amin'ny hafa
Ao amin'ity fizarana ity dia tokony ho lisitry ny hoe iza ianao ary inona no antony ampidirinao amin'ny data. Mety ho tafiditra izany, saingy tsy voafetra ho an'ny, analytics, marketing, vavahadin'ny fandefasana, mpamatsy fandefasana, ary entana momba ny antoko fahatelo.
Izahay dia mizara vaovao amin'ireo antoko fahatelo manampy anao hanolotra ny baiko sy serivisinao. Ohatra:
Ao amin'ity fizarana ity, tokony ho tanisanao lisitra ireo mpampiorina ny fandoavam-bola any ivelany any amin'ny fivarotanao, satria azony atao ny mandefa angon-drakitra an'ny mpanjifa. Izahay dia mampiasa an'i PayPal ho ohatra, fa raha tsy mampiasa PayPal ianao dia tokony hesorinao.
Manaiky fandoavam-bola miaraka amin'ny PayPal izahay. Mandritra ny dingana fandoavam-bola dia alefa amin'ny PayPal ny data-nao sasany. Ny fampahalalana ilaina fotsiny amin'ny fametrahana na fanatanterahana ny fandoavam-bola no hambara, toy ny vidin'ny fividianana sy ny fandoavam-bola. Eto ianao afaka mahazo Politika momba ny fiainana manokana an'ny PayPal View.
Tohanana izahay amin'ny fanaparitahana vaovao mombamomba azy ary tohizo hatrany!